Charles Njonjo dị afọ 100 na-egwu ugwu ugwu dị na ugwu ugwu Ogige Ntụrụndụ Mgahinga
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Ịrụ ọrụ » Charles Njonjo dị afọ 100 na-egwu ugwu ugwu dị na ugwu ugwu Ogige Ntụrụndụ Mgahinga
Inweta njem nleta • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • omenala • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ kacha ọhụrụ na Kenya • News • ndị mmadụ • Ịrụ ọrụ • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ na -agbasa na Uganda • Akụkọ dị iche iche
Charles Njonjo dị afọ 100 na-agagharị gorilla ugwu n’elu Ugwu Mba Mgahinga
Charles Mugane Njonjo, onye mbu nke Kenya nke nwere nnwere onwe mgbe Attoney General nọ n'okpuru Onye isi ala Jomo Kenyatta, gbara narị afọ na Jenụwarị 23, 2020.
Iji cheta emume a, narị afọ gara aga kpebiri ime ya na ndị gorilla ugwu nọ n'ihe ize ndụ nke oke ọhịa Ugwu Ogige Ntụrụndụ Mgahinga, nke dị na South Western Uganda.
Ndị ezinụlọ ya na Njonjo soro ya, banye helikọpta maka 'ga-eme tupu ị nwụọ' ahụmịhe na ndepụta ịwụ ndị njem ọ bụla.
Iji jisie ike soro, Njonjo bu n'oche sedan a na-akpọ 'helikopta' nke akpọpụtara maka ndị nwere nkwarụ, ndị merụrụ ahụ ma ọ bụ ndị okenye. Sedan na-efu US $ 300 iji were ego ma ọ gụnyere otu ndị ọrụ asatọ na iri na abụọ na-atụgharị ndị na-ebu 'trackers'. Ọ na-abịa kwadebere eriri oche na oche ụgbọ ala maka mgbakwunye nkasi obi.
Njonjo ga-azụrịrị uwe ahia ya uwe ojii, nke na-eke ọla edo yana okpu bọọlụ nke mere ka akpọ ya "Duke nke Kabeteshire" maka akwa jeans na ndị na-azụ ya.
“Anọ m na King's College Budo wee soro Eze Freddie (Kabaka Edward Mutesa II nke alaeze Buganda) gaa ebe ahụ. Enwere m mmasị na Uganda na ihe m nwetara n'aka gị. Enwere m obi ụtọ ịhụ gorillas, ụmụntakịrị abụọ na nnukwu nwoke abụọ, "Njonjo kwuru mgbe e nyechara ha akwụkwọ nyocha na nyocha nke ọma na Gorillas na Mgahinga Gorilla National Park.
Njonjo, onye ọka iwu Britain a zụrụ azụ bụ otu n'ime ụmụ amaala Kenya kacha nwee mmetụta na ịba ọgaranya, nwere ikike maka ọdịnala ya, onye amaara na ya na ndị ọchịchị Israel nwere mkparịta ụka na nzuzo nke mere ka ndị Commandoes nke Israel rute na Kenya n'oge nsogbu njigide 1976 na Ntinye.
Ọ lụrụ Margaret Bryson na ọnụ, ha nwere ụmụ anọ ndị ọkachamara niile na-aga nke ọma.
Ọ na-agbadata dị ka nwoke kachasị okenye mara amara na ọ gorillala ugwu, ihe ngosi nke kwesịrị ịgbada na Guinness Book of World Records.
Ogige Ntụrụndụ Mgahinga Gorilla na-anọdụ ala n'igwe ojii, na elu nke n'etiti 2,227m na 4,127m. Dị ka aha ya na-egosi, e kere ya iji chekwaa ozodimgba ugwu ndị na-adịghị ahụkebe nke bi n'oké ọhịa ya, ọ bụkwa ebe dị mkpa maka enwe enwe ọla edo dị n'ihe ize ndụ.
Nakwa dị ka ihe dị mkpa maka anụ ọhịa, ogige ahụ nwekwara nnukwu mkpa ọdịbendị, ọkachasị maka ụmụ amaala Batwa pygmies. Ebo a bụ ndị mbụ “jikọtara ọhịa” a, ọ nweghịkwa mgbe a ga-amata ihe gbasara ha mgbe ochie gbasara nzuzo
Ihe ndị kachasị mma nke Mgahinga bụ ugwu atọ ya, na-ala n'iyi, akụkụ nke ọmarịcha Virunga nke dị n'akụkụ mpaghara Uganda, Congo na Rwanda. Mgahinga bụ akụkụ nke Mpaghara Nchekwa Virunga buru ibu nke gụnyere ogige ntụrụndụ dị n'akụkụ na mba ndị a. Ndagwurugwu ugwu ugwu ahụ nwere ihe dị iche iche dị iche iche na ndụ dị iche iche na ndụ dị iche iche, na elu ha na-enye ọnọdụ dị egwu na ọmarịcha ọmarịcha a.